Xafiiska LibreOffice Office: In yar oo ka mid ah wax kasta oo aad wax badan uga baran karto | Laga soo bilaabo Linux
Sida aan dhamaanteen sifiican u wada ognahay, Xafiiska LibreOffice Office waa barnaamij softiweer ah oo la dhiirrigeliyey, la soo saaray oo si ballaadhan loogu isticmaalay Barnaamijka Bilaashka ah, Ilaha Furan iyo Bulshada GNU / Linux; ka sokow ahaanshaha, mashruuc ka mid ah hay'adda aan macaash doonka ahayn, oo loo yaqaan: Aasaaska Dukumintiga.
Iyo sidoo kale, in hadda la heli karo, xilligan (12/2020) ee version 6.4.7 adiga nooc deggan (wali laan) iyo 7.0.3 version adiga nooc cusub (cusub). Ahaanshaha noocaan ugu dambeeya wuxuu xusay bilowgiisii ​​ugu dambeeyay ee weynaa, wuxuu diirada saaray bixinta waxqabad wanaagsan, iswaafajin horumarineed, iyo astaamo badan oo cusub si kor loogu qaado wax soo saarkaaga.
Kuwa doonaya inay sahamiyaan kuwa kale Qoraallo hore oo laxiriira LibreOfficeKa dib markaan dhammeeyo akhriska daabacaaddan hadda, waxaan kugula talineynaa waxyaabaha soo socda:
"Kooxda horumarinta LibreOffice waxay ku dhawaaqeen usbuucan koowaad ee Diseembar, helitaanka nooca beta ugu horreeya ee LibreOffice 7.1. Noocani cusub wuxuu ku darayaa astaamo cusub barnaamijyada kala duwan ee ka kooban qolka xafiiska furan, iyo sidoo kale waxqabadka qaar". Marka hore beta LibreOffice 7.1 ayaa la heli karaa
LibreOffice 7.0 wuxuu la yimaadaa horumarinno iswaafajin badan DOCX, XLSX, PPTX iyo inbadan
LibreOffice 6.4.4 hadda waxaa lagu heli karaa horumar badan
1 Xafiiska LibreOffice Office
1.1 Waa maxay xafiiska LibreOffice Office?
1.2 Halkee laga bartaa waxbadan oo ku saabsan LibreOffice?
Xafiiska LibreOffice Office
Waa maxay xafiiska LibreOffice Office?
"LibreOffice waa qolal xafiis oo awood badan leh; isku xirnaanta nadiifka ah iyo aaladaha awooda leh ayaa kuu oggolaanaya inaad siideyso hal-abuurkaaga oo aad u kordhiso wax soo saarkaaga. LibreOffice waxay kujirtaa codsiyo dhowr ah oo ka dhigaya kuwa ugu awooda badan xafiiska bilaashka iyo furan ee suuqa: Qoraa, ereyga wax soo saaraya, Calc, xaashiyaha, Bogga, Tifatiraha soo bandhigida, Sawir, arjigayaga sawirada iyo qulqulka qulqulka, Saldhigga, keydkeena iyo isdhexgalka keydka macluumaadka kale, iyo Xisaabta sixitaanka qaaciidooyinka xisaabta."
Halkee laga bartaa waxbadan oo ku saabsan LibreOffice?
Labadaba kuwa noo aqriyay anaga (FromLinux) Sida kuwa inta badan akhriya degellada kale ee lamidka ah, way ogyihiin in websaydhadeenu badiyaa tixraacaan LibreOffice (iyo Xafiisyada kale ee Xafiiska) hab war iyo farsamo ah, taas oo ah, heerka sii deynta, muuqaalada iyo wararka, iyo mararka qaarkood sida adiga rakibaadda Ama wax kasta dhibaatada waqtiga.
Si kastaba ha noqotee, inta badan kuma xirno isticmaalkeeda, taasi waa, qeybta isticmaaleha, faahfaahinta sida wax looga qabto dhexdooda, marka la soo koobo, in looga shaqeeyo sida ugu habboon. Sababtaas awgeed, isticmaaleyaal badan ayaa had iyo jeer isweydiin kara: Xagee iyo sideen uga baran karaa LibreOffice?
Si looga jawaabo su'aashaas, daabacaadan waxaan ku bixinaa waxyaabaha soo socda xiriiriyeyaasha weydiinta si ay u gaaraan ujeedadaas ah bartaan sida ugu habboon ee loo isticmaalo noo qaali ah "Xafiiska LibreOffice Office":
Caawinta khadka tooska ah ee LibreOffice
Bulshada rasmiga ah ee Isbaanishka ee Telegram
Kanaalka rasmiga ah ee Isbaanishka YouTube-ka
Qaar kale Isbaanish
Qaar kale oo Ingiriisi ah
Iyadoo la tixgelinayo koox rasmi ah ku xusan ka mid ah Jaaliyada LibreOffice ee Isbaanishka ee Telegram, kaas oo horeyba u dhexgalay kun (1000) qof ka badan Wadamada ku hadla Isbaanishka, Way fiicantahay in si isku mid ah loo muujiyo, iyo sida ay qabaan maamulayaasheeda:
"Xikmad badan, aqoon iyo jawi wanaagsan ayaa la wadaagayaa markay tahay LibreOffice (LO). Laga soo bilaabo xagga farsamada ilaa arrimaha falsafadda waxaa lagu taabtay ixtiraam weyn kanaalka."
Intaa waxaa dheer, way fiicantahay in la muujiyo in qaar ka mid ah xubnaheeda ay cusub yihiin kuwa kalena aad u horumarsan yihiin, laakiin dhammaantood waxay leeyihiin xamaasad badan. Software Free iyo kan weyn Xafiiska LibreOffice Office.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Suite Ofimática LibreOffice», gaar ahaan ku saabsan fikradaha qaarkood, wararka iyo talooyinka farsamada; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Xafiiska LibreOffice Office: In yar oo ka mid ah wax kasta oo aad wax badan uga baran karto
Waxaan kugu hambalyeynayaa maqaalkaaga aadka u fiican.
Markii iigu horreysay ee aan la kulmo qol bilaash ah xafiiska wuxuu ahaa Openoffice, 2006.
14 sano ayaa laga soo gudbay inkasta oo aan isticmaalo Libreoffice, waxaan awooday inaan xaqiijiyo horumarkiisa weyn. Waa qormadeyda shaqo maalmeedka. In kasta oo ay Xafiiskayga ugu adeegsadaan shaqadayda, wax dhib ah kalama kulmin sidii aan uga heli lahaa kooxdan cajiibka leh
Aad baad ugu mahadsantahay isku xirnaanta wada tashiga inaad waxbadan ka ogaato.
Jawaab Ignacio Alejandro Neumann Cerda
Salaan, Ignacio. Waad ku mahadsantahay faalladaada. Waxaan ku faraxsanahay in waxyaabaha la daabacay ay ahaayeen kuwo aad u faa'iido badan oo raaxo leh.
QEMU 5.2 waxay la timid horumarin loogu talagalay RISC-V, isku-duwaha isku-darka iyo inbadan